Okufundiswa Yibhayibhile | Ukukrexeza
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iban Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMaltese IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiOromo IsiPangasina IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUrdu IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Nangona ukunyaniseka emtshatweni kubabazwa njengeyona nto intle, ukukrexeza kusaqhubeka kuchitha iintsapho ezininzi.
Kwezinye iindawo kuyinto eyamkelekileyo ukuba umntu otshatileyo alale nomntu angatshatanga naye, ingakumbi xa loo nto isenziwa yindoda. Ukanti abanye abawujongi umtshato njengento efanele ihlal’ ihleli.
EBhayibhileni ukukrexeza kubhekisela ekulaleni ngabom komntu otshatileyo nomntu angatshatanga naye, enoba yindoda okanye ngumfazi. (Yobhi 24:15; IMizekeliso 30:20) Ukukrexeza yinto ecekisekayo emehlweni kaThixo. KuSirayeli wamandulo isohlwayo sokukrexeza yayikukufa. (Levitikus 18:20, 22, 29) UYesu wafundisa nabalandeli bakhe ukuba bangakrexezi.—Mateyu 5:27, 28; Luka 18:18-20.
Abakrexezi bophula isifungo abasenza kumaqabane abo xa babetshata. Kwakhona, ‘bona uThixo.’ (Genesis 39:7-9) Ukukrexeza kunokubeka abantwana kwintlungu yokwahlukana nabazali babo. Kanti ngaphezu koko, iBhayibhile ithi “uThixo uya kubagweba . . . abakrexezi.”—Hebhere 13:4.
“Umtshato mawubekeke phakathi kwenu nonke, nesilili somtshato masingadyojwa.”—Hebhere 13:4.
Ngaba ukukrexeza kuyawuqhawula umtshato?
IBhayibhile iyamvumela umntu ukuba awuqhawule umtshato xa iqabane lakhe liye laziphatha kakubi ngokwesondo. (Mateyu 19:9) Loo nto ithetha ukuba iqabane elimsulwa linelungelo lokugqiba enoba liza kuhlala kusini na okanye liza kuwuqhawula umtshato nelo qabane liye alathembeka. Umntu umele azenzele esi sigqibo.—Galati 6:5.
Kwelinye icala umtshato ungcwele kuThixo ibe ufanele uhlale uhleli. (1 Korinte 7:39) UThixo uyayicaphukela into yokuba umtshato uqhawulwe ngenxa yoonobenani, abafana nokuthi iqabane lakho alikwanelisi. Ngoko ke, asifanele sikuthathe lula ukuqhawula umtshato.—Malaki 2:16; Mateyu 19:3-6.
“Ndithi kuni wonk’ ubani oqhawula umtshato nomfazi wakhe, ngaphandle kwangenxa yohenyuzo, umenza isisulu sokrexezo.”—Mateyu 5:32.
Ngaba ukukrexeza sisono esingaxolelekiyo?
Hayi. IBhayibhile ithi uThixo ubenzela inceba abantu abaguqukayo baze bazishiye izono zabo—kuquka nesi sokukrexeza. (IZenzo 3:19; Galati 5:19-21) Eneneni, iBhayibhile ide ithethe nangamadoda nabafazi abayekayo ukukrexeza baza baba ngabahlobo bakaThixo.—1 Korinte 6:9-11.
UThixo wamenzela inceba uKumkani uDavide wakwaSirayeli. UDavide wakrexeza nomfazi welinye lamajoni akhe. (2 Samuweli 11:2-4) IBhayibhile itsho phandle ukuba ‘into awayenzayo uDavide yabonakala imbi emehlweni’ kaThixo. (2 Samuweli 11:27) Emva kokuba elulekiwe, uDavide waguquka waza waxolelwa nguThixo. Kodwa ke kwafuneka avune imiphumo ebuhlungu yesono sakhe. (2 Samuweli 12:13, 14) Kamva noKumkani uSolomon osisilumko wangqina ukuba ‘nabani na okrexezayo uswele intliziyo.’—IMizekeliso 6:32.
Ukuba ukrexezile, cela uxolo kuThixo nakwiqabane lakho. (INdumiso 51:1-5) Funda ukukucaphukela ukukrexeza njengoThixo. (INdumiso 97:10) Yibaleke ngeenyawo iphonografi, ukuba nombono wakho ulele nomnye umntu, ukuncwasa, nayo nantoni na enokukwenza ufune ukulala nomntu ongatshatanga naye.—Mateyu 5:27, 28; Yakobi 1:14, 15.
Ukuba iqabane lakho liye lakrexeza, qiniseka ukuba uThixo uyayiqonda indlela ovakalelwa ngayo. (Malaki 2:13, 14) Mcele akuthuthuzele aze akukhokele, ibe “wokuxhasa.” (INdumiso 55:22) Ukuba ukhetha ukulixolela iqabane lakho uze uhlale emtshatweni, kuza kufuneka nisebenze nzima ukuze nakhe umtshato wenu kwakhona.—Efese 4:32.
Emva kokuba uDavide ekrexezile waza waguquka, umprofeti uNathan wathi kuye, “noYehova uyasidlulisa isono sakho.”—2 Samuweli 12:13.
Ukuba uzama ukuhlangula umtshato wakho emva kokrexezo, ngaphandle kwamathandabuzo uza kunyuka umnqantsa. Kodwa unako ukuphumelela!